संगीत/कला समीक्षा – Page2– मझेरी डट कम
सङ्गीतमा विश्व-शैली र मौलिकताको प्रश्न
हाम्रो नेपाली साङ्गीतिक शैली कति प्रतिशत मौलिक छ ? हुन त यो हिसाब-किताबको विषय होइन ।
ईजरायल भूमिको पहिलो पाईलासँगै यो भूमिमा मगमगाइरहेका नेपाली साहित्यिक र साँगितिक फूलहरू चुम्ने सुबर्ण मौका पाउँदै आएको छु । यसै क्रममा सांगितिक कोशेली “ईशारा” स्वयम रचयिता लक्ष्मी अनुरागीद्वारा प्राप्त गरेको थिएँ । आजसम्म बिबिध कारण मैले आफ्नो श्रोता हुनुको धर्म निभाउन नपाउँदा आफैलाई खल्लो लागिरहेको अवस्थामा आज दुई शब्द ढिलै भए नि शुभकामना बिस्तार गरिदिएँ ।
मैले तिम्रो “ईशारा”लाई बुझ्न सकिन पहिले
त्यही पल सम्झिएर मुटु दुख्छ अहिले ।
तेस्रो टोरोन्टो नेपाली चलचित्र महोत्सव सम्पन्न
२०१० देखि टोरोन्टोमा अध्ययनरत् नेपाली विद्यार्थीहरूको प्रयासबाट शुरुभएको टोरोन्टो नेपाली चलचित्र महोत्सव (TNFF)ले आफ्नो तेस्रो महोत्सवलाई दुई दिनसम्म दसवटा कथानक तथा डकुमेन्ट्री चलचित्रहरूको प्रदर्शन गराएर मनायो ।
महिला दिवसका दिन गत ८ मार्चमा क्यानाडाका लागि महामहिम राजदूत डा. भोजराज घिमिरेको समुपस्थितिमा शुभारम्भ भएको महोत्सवमा सुजाता थापाले स्वागत मनतव्यबाट सम्पूर्ण प्रायोजकहरू, स्वयम्सेवक तथा उपस्थित दर्शकलाई स्वागत तथा कृतज्ञता प्रदान गर्नु भएको थियो भने चलचित्र निर्णायक मण्डलीका तर्फबाट प्रदर्शन गरिने चलचित्रका बारेमा मञ्जुश्री थापाले जानकारी गराउनु भएको थियो ।
जीवन कलायुक्त हुनुपर्छ । कलाविहीन हुनु मानव हुनुबाट बञ्चित हुनु हो । भनिन्छ, शिव सर्वकलाले सम्पन्न थिए, कृष्ण पनि सोह्र कलाले सम्पन्न थिए साथै राम समेत केही कलाले युक्त थिए । आजका हामी मान्छे कलाकारितामा विश्वास नराख्ने भुल गरिरहेका छौँ । खालि धनोपार्जनमा ध्यान लगाइरहेका छौँ । कलाले धन मात्र उपार्जन गर्दैन, जीवको धरोहर समेत निर्माण गर्दछ । अतः कलाको सम्मान हुनुपर्छ । सानो काम भनेर तुच्छरूपमा लिने सोचको विपक्षमा नउभिई हामी जीवनवोध गर्न सक्दैनौँ । हामीमा के–कस्ता कला छन् र के–कस्ता कामकाजको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुराको आभाष दिन र लिन व्यवहारोपयोगी जम्मा चौसठ्ठी वटा त्यस्ता कलाको अध्ययनमनन र चिन्तन आवश्यक हुन्छ ।
ने.रा.प्र.प्र. को वृहत् नेपाली शब्दकोशमा रोदीको अर्थ यसरी गरिएको छ – ‘विशेषत ः गुरुङ जातिमा प्रचलित राति निश्चित ठाउँमा ठिटाठिटीहरू भेला भएर गीत गाउने ख्याल ठट्टा गर्ने आदि मनोरञ्जन कार्यक्रम ।’
साङ्गीतिक क्षेत्रमा सप्तरी
मानवले आफ्नो जीवनको प्रादुर्भावको स्वर्णिम विहानीदेखि अस्तको कालो सन्धासम्म सङ्गीतलाई अस्तित्वको रूपमा स्विकार गर्नुपर्छ । मानव जीवनमा सङ्गीतले नछोएको अध्याय नै छैन । मानव सङ्गीतमय वातावरणमै जन्मन्छ र सङ्गीतमय वातावरण हुँदै श्मसानघाटसम्म पुग्छ । मृत मानिसलाई ‘राम नाम सत्य’ जप्दै श्मसानघाट लग्ने प्रथा यसकै ज्वलन्त उदाहरण हो । प्रकृतिको कणकणमा सङ्गीत लुकेको हुन्छ । सङ्गीतको मुटु स्वर हो । स्वर आत्माको नाद हो भने आत्मा परमात्माको स्वरूप हो । आत्माको सम्बन्ध परमात्मा भएझैँ स्वरको सम्बन्ध आत्मासँग भएको मानिन्छ । यसलाई नादब्रह्म भनिन्छ ।
दुई गीति संग्रह
मानवीय भावनाका भुल्काहरू बान्की मिलेर आउँदा गीत बन्छन्। त्यस्ता गीतले स्तरीय संगीत र मीठो गला पाए भने ती कालजयी हुन्छन्।
‘राजमति’ लोकगीतको भाषिक गुम्फन र विचलन पक्ष राजमति गीतको नेपाली शब्दानुवाद
राजमति कुमति जिके वःसा पिरति : राजमति कुमति मसित आए पिरति
हाय बाबा राजमतिचा : हाय् बाबा राजमति (चा)
म नेपाली लोकगीत सङ्गीतलाई माया गर्ने एक व्यक्ति । लोकगीत हाम्रो पहिचान बचाउने गीत हो । यसको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन हुनु पर्छ भनेर त्यसैको अध्ययनमा लागेको एक विद्यार्थी ।
जागिरको एकनास दिनचर्याबाट वाक्क भएर राजेन्द्र थापा काठमाडौँबाट पूर्वतिर हान्निए । झापामा पुगेपछि उनलाई पहाडकी रानी इलाम जाने इच्छा भयो ।
चलचित्र जगतमा धार्मिक भावनाले प्रेरित भइ चलचित्र बनाउने चलन नयाँ हैन । नेपालमा भने त्यस्ता उदाहरणहरू थोरै मात्र छन् । यसै क्रममा “पटाचारा” चलचित्र सबैभन्दा नयाँ उदाहरणको रूपमा अगाडि आएको छ ।
शास्त्रीयसङ्गीत १३ औं शताब्दीदेखि मुसलमान र हिन्दु संस्कृतिको सम्मिश्रणबाट विकसित हँुदै आएको उत्तर-भारतीय शास्त्रीयसङ्गीत जसलाई ‘हिन्दुस्तानी शास्त्रीयसङ्गीत’ पनि भन्ने गरिन्छ । हिन्दुस्तानी शास्त्रीयसङ्गीत भन्नाले सितार, सरोद, हार्मनियम, तबला आदि जस्ता बाजाहरू ।
जब म झ्यालबाट बाहिर चिहाउन खोज्छु, सिमेन्टका बाक्ला जङ्गलहरूमा ठोक्किएर दृष्टि आफैँतिर फर्किन्छन् । कुनै बेला यही राजधानीलाई भानुभक्तले ‘अमरावती कान्तिपुरी नगरी’ भनेर स्वर्गको पनि शिरमा राखेका थिए । आज यो अमरावती धूँवा, धूलो र अनेकन प्रदूषणभित्र निसास्सिएर क्षयरोगी भएको छ । मान्छे त छन्, त्यसैले यसलाई बस्ती नभन्नु सार्थक नहोला तर मानिसभित्रको संवेदना अब राजधानीले समाहित गर्न नसक्ने भएको छ । राजधानी अब मानिसको चेतना र भावनाबाट बिस्तारै पाषण स्वभावमा रूपान्तरित हुँदैछ ।